Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Fanjakana marefo
Inty sy Nday : Fanjakana marefo
Fanjakana toa inona indray izany no hitantana an’i Madagasikara manomboka ny volana febroary 2019? Ny fifidianana izay hotanterahana amin’ny faha 19 desambra 2018 izao dia tsy maintsy avoaka amin’ny fomba ofisialy ny volana janoary 2019. Ny faha 24 febroary 2019 dia tokony ho vita ny fametrahana izay filoham-pirenena ho lany eo, ka handray ny asany.
Inona no fanjakana hipoitra eo ? Fanjakana marefo sa fanjakana jadona sa fanjakana tsy refesi-mandidy?
Samy manana ny andraisany izany fanjakana marefo izany ny olona tsirairay avy. Toa izany koa ny fanjakana jadona ary ny indrindra fa ny fanjakana tsy refesi-mandidy.
Ny fanjakana marefo dia fanjakana tsy afaka mampihatra ny lalàna velona ao aminy intsony na koa mampiasa izany amin’ny tsy rariny. Fanjakana izay anjakan’ny tsy ara-dalàna. Misy fitondrana roa samy hafa ka hafa ny an’ny fanjakana ara-dalàna ary manana ny azy koa ny vahoaka. Ohatra amin’izany ny mahakasika ny lalàna. Misy ny dina an’ny vahoaka izay ifampitondrany sy ifampifehezany ary misy koa ny lalàna ataon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona izay an’ny fanjakan ara-dalàna. Misy ny fitsaram-bahoaka ary misy koa ny tribonaly. Samy manao ny hataony ny roa tonta.
Ny fanjakana marefo koa dia ahitana miaramila roa samy hafa ka ny iray an’ny fanjakana ary ny iray hafa an’ny vahoaka. Ohatra akaiky amin’izany ny fisian’ny firoboroboan’ny “sécurité privée” marobe hatraty andrenivohitra ka hatrany ambanivohitra (Zazamainty, Jamà) izay misolo ny mpitandro filaminana. Ny firoboroboan’ny adian-jiolahy sy ny dahalo dia midika fa marefo ny firenena iray.
Ny fanjakana jadona indray dia ny fanjakana manaporitra ny olona ao aminy. Ny filohan’ny repoblika ihany sy ireo olona vitsy manodidina azy ihany no manana ny fahefana rehetra. Alainy avokoa ho eo ampelatanany ny fahefam-panjakana manontolo. Tsanganolona ny mpanatanteraka sy ny mpiasam-panjakana rehetra fa izay tian’ny filohan’ny repoblika sisa tsy maintsy tanterahana. Tsy misy dikany intsony ny andrim-panjakana rehetra. Ataony fitaovana hamenoana ny paosiny ny harem-pirenena. Hatramin’ny vadiny avy no mibaiko ny mpiasam-panjakana ambony sy ny minisitra.
Ny filohan’ny repoblika no mibaiko ny miaramila, ny fitsarana, ny ekônomia. Izay tsy manaraka ny baikony dia gadrainy na vonoiny mihitsy aza.
Mitovitovy amin’ny fanjakana jadona ny fanjakana tsy refesi-mandidy.
Amin’ny ankapobeny dia samy anjakan’ny kolikoly, ny fanararaotam-pahefana, ny gaboraraka, ny tsy fanajana lalàna ary ny fanodinkodinana volam-bahoaka ireo fahefana telo ireo. Efa samy niainana teto Madagasikara avokoa izy ireo ary nahatonga korontana pôlitika sy krizy niverimberina matetika.
Inona indray izany no hiainan’ny Malagasy manomboka ny taona 2019 ity ? Fanjakana marefo sa fanjakana jadona ?
Aza mieritreritra izany Lalàmpanorenana izany isika Malagasy fa tsy mihatra izany fa izay tian’ny filoham-pirenena ihany no tsy maintsy ato eto. Aza mieritreritra lalàna izany isika fa natao ho an’ny olona mahantra sy ny tsy manam-bola ny fonja.